Play-off မှာ အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေ ၊ အခက်ခဲဆုံးပြိုင်ဘက်တွေကို မျှော်လင့်ထားရတော့မယ့် ပေါ်တူဂီ - xyznews.co
Play-off မှာ အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေ ၊ အခက်ခဲဆုံးပြိုင်ဘက်တွေကို မျှော်လင့်ထားရတော့မယ့် ပေါ်တူဂီ
ပေါ်တူဂီ လက်ရွေးစင် အသင်းကတော့ ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ ကို တိုက်ရိုက် မအောင်မြင် ခဲ့ပါဘူး ။
ကိုယ့်မြေ ၊ ကိုယ့်ကွင်း ၊ ကိုယ့်ပရိသတ် ရှေ့မှာ ကစားရတဲ့ အုပ်စု နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်မှာ ဆားဘီးယား ကို ရှုံးခဲ့လို့ ပါပဲ ။
ပေါ်တူဂီ ဟာ ပွဲအစ ၂ မိနစ် ကတည်းက ဦးဆောင်ဂိုး ရခဲ့ပေမယ့် ဂိုးကို မထိန်းထားနိုင်သလို နောက်ပိုင်း မှာလည်း ဆားဘီးယား ရဲ့ ဖိကစားမှုကို ခံခဲ့ရ ပါတယ် ။
၉၀+၁ မိနစ် မှာတော့ မီထရိုဗစ် က ဆားဘီးယား အတွက် အနိုင်ဂိုး သွင်းယူလိုက်ပြီး ပေါ်တူဂီ တို့ ပြန်ချေပဖို့ အချိန် မရရှိတော့ဘဲ ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ပေါ်တူဂီ ဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဝင်ခွင့် အတွက် Play-off ကစားရတော့ မှာပါ ။ ဒီနှစ်မှာ ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင် ထားတဲ့ Play-off ပုံစံသစ် အရ ပေါ်တူဂီ ဟာ အားနည်းတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေ နဲ့သာ မဟုတ်ဘဲ အင်အားကြီးတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေ နဲ့ပါ ဆုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ အလားအလာ ရှိနေပါတယ် ။
ဥရောပဇုန် Play-off ဟာ အခြားတိုက်ကြီးက အသင်းတွေနဲ့ ကစားစရာ မလိုဘဲ ကိုယ့် ဒေသတွင်း အသင်းတွေ နဲ့ ပြန်လည် ယှဉ်ပြိုင် ကစား ကြရမှာပါ ။
အုပ်စု ၁၀ ခုက ဒုတိယရ ၁၀ သင်း ဟာ ၂၀၂၁ ဥရောပ နေးရှင်းလိဂ် က အဆင့်အမြင့်ဆုံး အသင်း ( ခြေစစ်ပွဲလည်း မအောင် ၊ အုပ်စု ဒုတိယလည်း မရတဲ့ အထဲက အဆင့်အမြင့်ဆုံး ) ၂ သင်း နဲ့ အတူ ပေါင်းစပ်ပြီး ၁၂ သင်းပါဝင်တဲ့ Play-off မဲခွဲပွဲ ကို ပြုလုပ် သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အသင်း ၁၂ သင်းကို ၄ သင်းစီ ပါတဲ့ အုပ်စု ၃ ခု အဖြစ် မဲခွဲမှာပါ ။ အုပ်စု တခုစီက ၄ သင်း ဟာ ၂ ဆီမီးဖိုင်နယ် – ဖိုင်နယ် ပုံစံ အတိုင်း ယှဉ်ပြိုင် ကြရမှာ ဖြစ်ပြီး အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း စနစ် မပါရှိပါဘူး ( တကျော့ကန် ရှုံးထွက် စနစ် ) ။
အိမ်ရှင် ကိုတော့ ထပ်မံ မဲနှိုက် ရွေးချယ် သွားမှာပါ ။ ဒီ အုပ်စု ၃ စုမှာ ချန်ပီယံ ဖြစ်လာမယ့် အသင်း ၃ သင်း ထွက်ပေါ် လာမှာ ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒိ အသင်းတွေဟာ ၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာ ကနေ ဒီဇင်ဘာ အထိ ကျင်းပမယ့် ကာတာ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲကြီး ကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အုပ်စု ဒုတိယ အသင်းတွေ ကတော့ –
Group A – ပေါ်တူဂီ
Group B – ဆွီဒင်
Group C – အီတလီ ( သို့ ) ဆွစ်ဇာလန်
Group D – ဖင်လန် ( သို့ ) ယူကရိန်း
Group E – ဝေးလ် ( သို့ ) ချက် ရီပတ်ဘလစ်
Group F – စကော့တလန်
Group G – နယ်သာလန် ( သို့ ) တူရကီ ( သို့ ) နော်ဝေ
Group H – ရုရှ
Group I – ပိုလန် ( သို့ ) အင်္ဂလန်
Group J – မြောက် မက်ဆီဒိုးနီးယား တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ် ။
၂၀၂၁ နေးရှင်းလိဂ် အဆင့် ရပ်တည်မှု အရ ယူကရိန်း ၊ ဘော့စနီးယား နဲ့ အိုက်စလန် တို့ ထဲက ၂ သင်းဟာ Play-off ကစားခွင့် ရရှိဖို့ အခြေအနေ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေပါတယ် ။
အကယ်၍ ယူကရိန်းသာ အုပ်စု ဒုတိယ ရခဲ့ရင် ဘော့စနီးယား နဲ့ အိုက်စလန် တို့ Play-off ကစားကြရမှာပါ ။
တကယ်လို့သာ နယ်သာလန်ကြီး မတော်တဆ ခြေချော်ပြီး အုပ်စု တတိယဖြစ်သွားခဲ့ရင်တော့ အိုက်စလန် အတွက် မျှော်လင့်ချက် ကုန်ဆုံး သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ပေါ်တူဂီ အနေနဲ့ မဲခွဲပွဲမှာ ကံဆိုးခဲ့ပါက အီတလီ ၊ နယ်သာလန် တို့လို အသင်းတွေနဲ့ အတူ ကျရောက် နိုင်သလို အဲ့ဒိ အသင်းတွေ မပါခဲ့ရင်တောင်မှ ဆွီဒင် ၊ ရုရှ ၊ ဆွစ်ဇာလန် တို့လို အသင်းကောင်းတွေ နဲ့ အတူ ကျရောက်ဖို့ အလားအလာ ရှိလို့ နေပါတယ် ။
ပေါ်တူဂီ အတွက် လွယ်ကူ နိုင်တဲ့ အသင်းတွေ ကတော့ မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား ၊ ဘော့စနီးယား ( နေးရှင်းလိဂ် က ဝင်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ အသင်း ) ၊ ဖင်လန် တို့ ဖြစ်လာနိုင် ပါတယ် ။
ပေါ်တူဂီ ဟာ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ကို တိုက်ရိုက် ခြေစစ်ပွဲ အောင်ခဲ့ ပေမယ့် ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလား ကိုတော့ Play-off ကစား ခဲ့ရဖူးတဲ့ သမိုင်း ရှိခဲ့ဖူး ပါတယ် ။
Play-off မှာ ဘယ်အသင်းတွေ ပါဝင်မလဲ ဆိုတာ ကတော့ လာမယ့် ကြာသပတေးမှာ သိရတော့မှာပါ ။
ပေါ်တူဂီ ခြေစစ်ပွဲ အောင်နိုင်ပါ့မလား . . .
Previous Article သူ့ Idol တွေဖြစ်တဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ ဇီဒန်း တို့တောင် မရဖူးတဲ့ ထူးရှယ်မှတ်တမ်းထဲကို ပါဝင်ခွင့် ရသွားခဲ့တဲ့ အမ်ဘာပေ
Next Article စပိန် ရဲ့ ခြေစစ်ပွဲအောင်မှုအတွက် နည်းပြ အန်နရီကေး ကို ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ဂျော်ဒီအယ်လ်ဘာ